Kitra vehivavy – «Can 2018»: voahosotra ho tompondaka ny Super Falcons Nizeria | NewsMada
Kitra vehivavy – «Can 2018»: voahosotra ho tompondaka ny Super Falcons Nizeria
Mbola voatazon’ny tovovavin’i Nizeria ny anarana maha tompondakan’i Afrika azy, eo amin’ny taranja baolina kitra. Lasan’ny Super Falcons Nizeria, fanintsiviny indray mantsy ny amboara, tamin’ity andiany faha-11, ity.
Norombahin’ny Super Falcons, avy any Nizeria, ny anarana maha tompondakan’i Afrika “Can 2018”, taranja baolina kitra, sokajy vehivavy. Resiny teo amin’ny famaranana, tamin’ny fandakana ny “tirs au but”, 4 no ho 3 ny tovovavin’i Afrika Atsimo. Fihaonana, notanterahina tao amin’ny kianja Accra, renivohitr’i Ghana, ny asabotsy lasa teo.
Tsy mora tamin’ny Nizerianina, ny nahazo ity anaram-boninahitra ity, satria niady hatramin’ny minitra farany, ny fihaonana teo amin’ny roa tonta. Samy niezaka nitady hamonoam-baolina ny an-daniny sy ny an-kilany, saingy tsy nisy nety nahatafiditra baolina izy ireo, tao anatin’ny 90 mn, nilalaovana. Mbola sahala ihany koa ny isa tao anatin’ny fanalavam-potoana, 15 mn indroa miditra. Voatery niditra teo amin’ny fandakana ny “tirs au but” ny roa tonta, hamaritana izay ho mpandresy. Nanatombo teo amin’ny fahaizana mandaka teo ny Nizerianina, ka nivoaka ho mpandresy.
Afa-bela, tamin’i Afrika Atsimo izany ny Nizerianina, efa resin’izy ireo, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0 teo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona. Fanintsiviny kosa ny nahazoan’ny Super Falcons, ity Can ity, hatramin’izay andiany faha-11 nisiany izay. Nahazo ny laharana fahatelo, ny Liona tsy voafolaka avy any Kameronina, rehefa nanilika ny Voromahery Malianina, tamin’ny isa mazava, 4 no ho 2, teo amin’ny fiadiana ny laharana fahatelo.
Voahosotra ho mpilalao mendrika sy mpamono baolina betsaka indrindra, tamin’ity “Can 2018” ity, ilay lohalaharana afrikanina tatsimo, i Chrestinah Thembi Kgatlana.
Hisolo tena an’i Afrika, any amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany “Mondia 2019”, hatao any Frantsa, i Nizeria, i Afrika Atsimo ary i Kameronina.